Hong Kong (Shina) · Janoary, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong (Shina) · Janoary, 2020
Tantara mikasika ny Hong Kong (Shina) tamin'ny Janoary, 2020
Shina 2007: Nomena loka BoBs ny Shinoa
Shina28 Janoary 2020
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2007) Tamin'ny taona 2007, nanomboka ny 22 Oktobra 2007 ny fifidianana tamin'ny bilaogy tsara indrindra Best of Blogs: afaka nifidy tamin'ny aterineto ho an'ny bilaogy, bilaogin-dahatsary ary ny rakipeo ny mpisera. 7.000 no notendrena manerana izao tontolo izao araka ny Deutsche Welle. Tafiditra tao anatin'ny...
Ao Hong Kong, ady ataon'ireo mpanao gazety amin'ny fanivanantena, fandrahonana ary herisetra ataon'ny polisy manohitontohina ny fampitambaovao momba ny “revôlisiônan'ny Elo”
Shina21 Janoary 2020
Tranonkala 4 mpamoaka vaovao tsy miankina no niaraka namoaka fanambaràna niombonana natao hanamelohana ny herisetra ninian'ny pôlisy natao tamin'ireo mpanao gazety. Mba hampitonitoniana an'i Beijing, manao fanivanantena ny sasany amin'ireo gazety.
Nilaza ny mpitondra vaovao avy any Beijing ao Hong Kong fa antenainy ny hiverenan'ilay tanàndehibe amin'ny làlana marina
Shina17 Janoary 2020
Nilaza ny Tale vaovaon'ny Biraon'ny Fifandraisan'i Beijing, Hong Kong fa manantena ny hiverenan'ilay tanàndehibe haingana amin'ny làlana tokony hizorany izy
Fanoherana03 Janoary 2020
Maro ny mihevitra fa fitaovam-piadiana matanjaka ny hery aratoekarenan'ny olompirenena hampisy fiovana ara-politika misy dikany ho an'ny tanàna.
Fanoherana02 Janoary 2020
Maro ireo olona manao volantera handika an-tsoratra ireo fiarahabana fety amin'ny fiteny samihafa sy hanoratra taratasy mitovy rafitra ho an'ny olona manana fiaviana sy saranga samihafa.
Iza no namotika ny fandriampahalemana sy ny hafaliana krismasy tao Hong Kong?
Fanoherana01 Janoary 2020
Sady tsy nilamina no tsy nahafaly ny krismasy tao Hong Kong raha miezaka mandeha amin'ireo distrika lehibe fiantsenana ny polisy misahana ny rotaka mitondra fitaovam-piadiana enti-miady amin'ny rotaka hanaparitahana ireo fihetsiketsehana tselatra ho fanoherana. Hatramin'ny 28 Desambra teo, hatramin'ny 336 ny isan'ny olona nosamborina.